Umthetho wezimo ezingalindelekile kanye ne-coronavirus (COVID-19) | Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ilungiswe ngo-March 30, 2020
Ngo-March 11, i-World Health Organization (WHO) yamemezela ngokuqubuka kwe-coronavirus, eyaziwa ngokuthi yi-COVID-19, njengobhubhane lomhlaba wonke. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuqubuka sekusabalele ngokushesha nohulumeni emhlabeni wonke bethatha izinyathelo ezisheshayo ukudambisa ukubhebhetheka kwe-COVID-19.
Esikwenzayo ngukuhlinzeka ngokuhlanganiswa okulandelayo kwe-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile ukuze sisize ukuvikela umphakathi wethu futhi siphane ngokuthula kwengqondo. Sicela ubeke iso kuleli khasi ukuze uthole ezakamuva maqondana nokuhlanganiswa.
Icebiso: Uma uyisivakashi, ungathola izindlela zokukhansela nokubuyiselwa imali ngokukhetha uhambo lwakho kokuthi Ikhasi lohambo. Uma ungumbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kuka-March 14, 2020 no-May 31, 2020, kuhlanganisiwe kuyinqubomgomo futhi kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Izivakashi ezikhanselayo zizoba nokuningi ezingakhetha kukho maqondana nokukhansela kanye nokubuyiselwa imali, futhi ababungazi bangakhansela ngaphandle kwenkokhiso noma kuthinteke isimo sabo Sombungazi Ovelele. Kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisa imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo esihlanganisa wonke amanani wesevisi okukhansela okuhlanganisiwe. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka ukuba ufakazele amaqiniso kanye/noma unikeze amadokhumenti asekelayo ngesimo sakho esingalindelekile.
Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile ekubhukheni okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020. Ukukhanselwa okuthunyelwe ngaphambi kuka-March 14, 2020 kuzophathwa ngokuvumelana nokuhlanganiswa kwezimo ezingalindelekile ezisebenza ngesikhathi sokuthunyelwa.
Uma ukubhukha sekuvele kuqalile (ukungena sekudlulile) lesi simo esingalindelekile asisebenzi.
Izinqubomgomo ezahlukahlukene ziyasebenza ekubhukhweni kwamakhaya ezweni lase-China kanye nangokubhukha i-Luxe noma i-Luxury Retreats.
Ukubhukha okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho
Ukubhukha kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020 noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kuka-March 14, 2020 no-May 31, 2020, kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Lokhu kusho ukuthi izivakashi ezikhanselayo zizokwazi ukukhetha, isikweletu sohambo noma ukubuyiselwa imali ephelele, ababungazi bangakhansela ngaphandle kokukhokhiswa noma kuthinteke isimo sabo Sombungazi Ovelele, futhi i-Airbnb kuphakathi kokuthi izobuyisela imali noma ikhiphe isikweletu sohambo esihlanganisa wonke amanani esevisi.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena olungemva kuka-May 31, 2020, akuhlanganisiwe okwamanje ezimweni ezingalindelekile ezihlobene ne-COVID-19. Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Ukubhukha okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020
Ukubhukha kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020 ngeke kuhlanganiswe ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ngaphandle kwalapho isivakashi noma umbungazi ephethwe yi-COVID-19 njengamanje. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ezingahlanganisiwe zihlanganisa: ukuphazamiseka nokukhanselwa kwezinto zokuhamba; izeluleko zokuhamba nokuvinjelwa; izeluleko zezempilo nokuhlukaniswa; izinguquko emthethweni osebenzayo; nokunye okuyimiyalelo kahulumeni—efana nemiyalelo yokubaleka, ukuvalwa kwemingcele, ukunqatshelwa kokuqasha isikhathi esifushane kanye nezimfuneko zokuhlala lapho ukhona. Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile uhloselwe ukuvikela izivakashi nababungazi ezimweni ezingalindelekile ezivela ngemva kokubhukha. Ngemva kokumenyezelwa kwe-COVID-19 yi-World Health Organization njengobhubhane lomhlaba wonke, umthetho wezimo ezingalindelekile ngeke usasebenza ngoba i-COVID-19 kanye nemiphumela yayo akusekona okungalindelekile noma okuzumayo. Sicela ukhumbule ukuhlola ngokucophelela inqubomgomo yokukhansela yombungazi lapho ubhukha futhi ucabangele ukukhetha okuvumela ukushintshashintsha nezimo.
Uma uyisivakashi, ungahlola inqubomgomo yokukhansela yokubhukha kwakho futhi uthole izindlela zokukhansela nokubuyiselwa imali ngokukhetha uhambo lwakho kokuthi Ikhasi lohambo. Uma ungumbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Ezakamuva nge-coronavirus nangezinsiza
Sihlele izihloko ukuze zisize umphakathi wethu phakathi nalesi sikhathi Esikhungweni Solwazi. Ungathola imininingwane yakamuva ngempendulo yethu ku-COVID-19, kusuka ezibuyekezweni zezinqubomgomo kuye ezinsizeni zababungazi nezivakashi.
Ungase futhi ufunde umthetho wezimo ezingalindelekile ukuze ufunde mayelana nokuhlanganiswa kwezimo ezingahlobene ne-COVID-19.
Sicela wonke amalungu omphakathi akhumbule inhlonipho, ukungabandlululi kanye nomthetho wethu wokungabandlululi lapho exhumana namanye amalungu omphakathi wethu.
Sizoqhubeka nokubukeza ukusetshenziswa kwalo mthetho. Sicela unake leli khasi ukuze uthole ezakamuva nemininingwane emisha.
Yikuphi engingakhetha kukho lapho ngikhansela ukubhukha kwendawo yokuhlala ngenxa ye-coronavirus (COVID-19)?
Kungani Okokuzithokozisa kwe-Airbnb engikubhukhile kukhanseliwe?
Kungani Okokuzithokozisa kwe-Airbnb engikubungazayo kukhanseliwe?
Ngizoyithola nini imbuyiselo yemali yami